UPDATE: Guddoomiyaha Baarlamaanka Galmudug oo la doortay iyo labadiisa ku xigeen oo midi dumar tahay | HalQaran.com
Home Wararka Maanta UPDATE: Guddoomiyaha Baarlamaanka Galmudug oo la doortay iyo labadiisa ku xigeen oo...
UPDATE: Guddoomiyaha Baarlamaanka Galmudug oo la doortay iyo labadiisa ku xigeen oo midi dumar tahay
Guddoomiyaha cusub ee Baarlamaanka Galmudug, Xildhibaan Dr. Maxamed Nuur Gacal.
Dhuusamareeb (Halqaran.com) – Waxaa Jimcihii maanta magaalada Dhuusamareeb ee Caasimadda Galmudug lagu qabtay Doorashada guddoomiyaha Baarlamaanka labaad ee Maamulka Galmudug oo ay ku tartameen laba musharax, iyadoo sidoo kale la doortay ku xigeenka koowaad iyo labaad.
Doorashada xilka guddoomiyaha baarlamaanka oo aad u kululeyd ayaa waxaa ku tartamay Xildhibaan Dr Maxamed Nuur Gacal iyo Xildhibaan Cabdinaasir Aadan Cismaan, waxaana guddoomiyaha Baarlamaanka Labaad ee Galmudug loo doortay Xildhibaan Dr. Maxamed Nuur Gacal.
Ka hor doorashada guddoomiyaha Baarlamaanka Galmudug ayaa waxaa tartanka isaga harey Cabdullaahi Axmed Calasow oo kamid ahaa musharixiinta guddoomiyaha Baarlamaanka Galmudug.
Guddiga KMG ah ee doorashada guddoomiyaha Baarlamaanka Galmudug ayaa shaaciyay in Dr Maxamed Nuur Gacal uu helay 54 cod halka Cabdinaasir Aadan Cismaan uu helay 34 Cod, hal cod ayaa halaabey, waxaana codeeyay 89 Xildhibaan oo ka tirsan Baarlamaanka Galmudug.
Doorashada ku xigeennada.
Guddoomiye ku xigeenka 1-aad ee Baarlmaanka Galmudug, Cabdullaahi Xersi Maxamed
Gudoomiye Ku-xigeenka Koowaad ee Baarlamaanka Galmudug, ayaa waxaa loo doortay Cabdullaahi Xersi Maxamed.
Cabdullaahi Xersi Maxamed ayaa wuxuu ka guuleystay Sadaq Sheekh Yuusuf oo kula tartamaayay booska guddoomiye Ku-xigeenka 1-aad ee Baarlamaanka Galmudug.
Guddoomiye ku xigeenka 2-aad ee baarlamaanka Galmudug, Faadumo Cabdi Cali
Sidoo kale, Faadumo Cabdi Cali ayaa galabta ku guuleysatay kursiga guddoomiye Ku-xigeenka Labaad ee Doorashada Baarlamaanka Galmudug.
Xildhibaan Faadumo Cabdi Cali ayaa waxay tartanka kaga adkaatay Xildhibaan Axmed Maxamed Maalin, iyadoo heshay 47 cod, halka Maalin uu helay 41 cod, waxaana xumaaday 1 cod.
Xildhibaan Faadumo Cabdi Cali oo ah gabar dhalinyaro ah oo dalka Ingiriiska ka timid ayaa Xildhibaanada Baarlamaanka Galmudug kaga mahadcelisay sida ay kalsoonida u siiyeen.
Ugu dambeyn, doorashada guddoonka Baarlamaanka Galmudug waa jaran-jaradii lagu gaari lahaa Doorashada Madaxtooyada Galmudug, waxaana si weyn ugu loolami doonaan musharraxiin badan oo xilkaasi u taagan.
guddoomiyaha baarlamaanka Galmudug oo la doortay
Xildhibaan Dr. Maxamed Nuur Gacal.